တရားထိုင်ခြင်း(ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း )နှင့် ကျန်းမာခြင်း အကျိုးကျေးဇူး – ဗဟုသုတရွာ
တရားထိုင်ခြင်း(ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း )နှင့် ကျန်းမာခြင်း အကျိုးကျေးဇူး
“အာရောဂျပရမာ လာဘာ၊ ကျန်းမာခြင်းသည် ကြီးမားသော လာဘ်ဖြစ်ကြောင်း” ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ဟောတော်မူခဲ့သည်။ အပြန်အားဖြင့် မကျန်းမာခြင်း၊ ရောဂါထူပြောခြင်းမှာမူ အကြီးမားဆုံးသောဆုံးရှုံးမှုကြီးပင် ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါ၏်။
ထို့ကြောင့် တရားထိုင်ခြင်း၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းသည် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပျက်သည့် အကျိုး(၂)မျိုး တစ်ပြီုင်နက်ရသော အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာခြင်းအကျိုးနှင့် သမာဓိရ၍ စိတ်ဓာတ်တည်ကြည် ငြိမ်းအေးခြင်း အကျိုးတို့ပင်တည်း။
“အဒွေစ္စ ၀စနာ ဗုဒ္ဓါ၊ ဘုရားစကားအမှားမရှိ” ဟူသည်နှင့်အညီ တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးလျှင် တကယ်အကျိုးရှိသည့် ဘုရားဟောသော အချက်အလတ်များ ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်ထိုက်ကြောင်း အထူးဖေါ်ပြရန် မလိုပါချေ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားအပေါ် ယုံကြည်မှု အားနည်းသူ ဖြစ်လျှင်သော်မှ ပြောသူ၊ ဟောသူ၊ ရေးသူကို ဖယ်ထားပြီး၊ တင်ပြထားသော အချက်အလတ် အညွှန်အကြားများအပေါ် အကဲဖြတ်၍ အခြေအနေ အချိန်အခါအလိုက် အံကိုက်အောင် လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦးတည်ချက် မှန်ကန်ကြောင်း တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းခြင်း၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်း၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အယူဝါဒ တဟ်ခုခုကို ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်း(ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်း)၊ ဘသသာရေးဆိုင်ရာ အဆုံးအမတိုင်း နေထိုင်ပြုမူ လုပ်ကိုင်ကျင့်ကြံခြင်းတို့ဖြင့် လူသားတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများကို ကုစားနိုင်၊ ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများကို ကမ္ဘာတ၀န်းရှိ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများကြား၌ တစ်နေ့တစ်ခြားတွေ့ရှိလာနေရ၏။
တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကို သက်သာစေနိုင်ကြောင်း အများသိဖူး ကြားဖူးကြသည်။ သို့သော် ဘာာ့ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ရသနည်းဆိုသည်ကို သိသူရှားသည်။ တရားထိုင်၍ ကျန်းမာခြင်းဖြစ်၏ဟု ဆိုသည်ထက် နက်နဲသော ဆေးပညာရှုထောင့်မှ အမြင်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
တရားထိုင်ခြင်းဟူသော ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းသည် ဘာသာရေးနှင့် ဆက်နွယ်နေပြီး၊ အိန္ဒိယ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဗောဒီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် ထင်ရှားပါသည်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟူသော တရားထိုင်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကောင်းလည်း ဖြစ်ပါ၏။
မိမိ၏ စိတ်စွမ်းအား၊ စိတ်တန်းခိုး (Will Power) တိုးတက်လာအောင်၊ ဈာန် အဘိညာဉ်ရအောင် တရားထိုင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိ၏။ တရားသဘောသိပြီး မဂ်ဖိုလ်ရအောင်၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်သဘော သိလာအောင် တရားထိုင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိ၏။ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိခံစားရအောင်၊ စိုးရိမ်သောက ပူပန်မှုများပယ်ပျောက်အောင် တရားထိုင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိ၏။
မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ကို တည်ကြည် ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ စိုးရိမ်းသောက ပူဆွေးမှုမှ ကင်းဝေးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်၏။ စိတ်အေးချမ်း တည်ငြိမ်မှုမှသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကိုပါ ရစေကြောင်း အကျင့်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါ၏။
ထိုသို့သော အကျိုးကျေးဇူးတရားကို တွေ့မြင်လာရသောအခါ အရှေ့တိုင်းသားများသာမက အနောက်တိုင်းသားများ၊ ဘာသာခြားများပင် စူးစမ်းကာ လက်တွေ့ ထိုင်လာကြသည်။ ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်လားမသိပေ။ အရှေ့တိုင်းမှ ပညာရပ်တို့သည် သူ့ချည်းနေလျှင် မည်သို့မျှ ပျံ့နှံ့ခြင်း မရှိဘဲ၊ အနောက်တိုင်းသားတို့နှင့် တွေ့မှ ကမ္ဘာသို့ ပြန့်နှံ့တတ်လေ့ ရှိသောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါ၏။
သူတို့တွင် သုတေသနအမြင်၊ သုတေသနဉာဏ် ရှိခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တရားထိုင်ခြင်းသည် လောကမှ ထွက်မြောက်ကြောင်း လောကုတ္တရာမှ လောကီစစ်စစ် ကိုယ်ကျန်းမာရေး၊ စိတ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေးပညာသို့ နှီးနွယ်လာ၏။ သုတေသနပြု ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ကြသည်။
မက်ဒီတေရှင်း ကုထုံးဆိုတာ ဘာလဲ?
သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် တွေ့ကြရသည်မှာ တရားထိုင်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ နှလုံးခုန်ခြင်း၊ အသက်ရှူခြင်း၊ အစာချေခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများ နှေးသွားကြောင်း တွေ့ကြရသည်။ ဟိုမုန်းများ၊ အင်ဇိုင်းများ အထွက်နှေးသွားသည်။
သို့ဖြစ်၍ ခန္ဓာကိုယ် သန့်စင်သွားသည့်ပြင် ဦးဏှောက်တွင်လည်း လုပ်ငန်းများ နည်းသွား၍ တည်ငြိမ် အနည်ထိုင်သွားကြောင်း တွေ့ကြရသည်။ ပထမတွင်မူ လူနာက တရားထိုင်ခြင်းအမှုကို (၁၀)မိနစ်မျှသာ ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မိနစ်(၂၀)၊ နာရီဝက် စသည်ဖြင့် တိုးကာတိုးကာ တရားထိုင်သွားနိုင်ကြောင်း တွေ့ကြရသည်။
စိတ်ကယောက်ကယက် ဖြစ်သော အခြေအနေ၊ (Anxisty)
သွေးတိုးရောဂါ၊ (High Blood Pressure)
ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်နှင့် အခြားရင်ခေါင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ (Chest Problems)
သွေးလှည့်ပတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ (Circulation)
နှလုံးရောဂါ၊ (Heart Diseases)
ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်း၊ (Muscle Tension)
အကြောက်လွန်ခြင်း၊ (Phouias Fear)
သွေးဆုံးချိန် ရောဂါလက္ခဏာများ၊ (Menopausal Syndrome)
စိတ်ဖိစီးမှုရှိနေသူများ၊ (Stress and Tension)
ချွဲကပ်နေသူများ၊ (Wheezing) စသောရောဂါများကို ပျောက်ကင်းနိုင်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် သက်သာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဆရာဝန်တွေက ဘယ်လိုယူဆသလဲ၊ ?
ဆရာဝန်များကမူ ဆေးပညာသဘောအရ တရားထိုင်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုးမဖြစ်နိုင်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ သုတေသနပြုခြင်းမှ တွေ့ရှိရသည်မှာ တရားထိုင်နေစဉ် အချိန်အတွင်း အသက်ရှူနှုန်း၊ နှလုံခုန်နှုန်း၊ ဥဏှောက်လုပ်ငန်းများနှေးကာ အနားရခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ နေ့စဉ်ပြဿနာများကို အေးဆေးစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ဆိုကြသည်။ ထို့ပြင် လူနာများက “တရားထိုင်ပြီးသောအခါ တရှောင်ရှောင် ဖြစ်နေခြင်းမှ ပျောက်ကင်းသွားကြောင်း” ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
သို့သော် ယင်းကိုကြည့်ပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားထိုင်လျှင် ရောဂါပျောက်သည်ဟု တစ်ယူသန်၍ မရပေ။ နှလုံးရောဂါရှိသူများသည် နှလုံးခုန်မြန်ကာ ရင်ဘက်မှ စူးအောင့်၍ အသက်ရှူကြပ်နေသည့် အချိန်အထိ တရားချည်း ဖိထိုင်နေရန် မသင့်ပေ။ သွေးတိုးရောဂါသမားများသည်လည်း ခေါင်းတွေမူး၊ ခြေလက်တွေ လှုပ်မရသည်အထိ တရားချည်းထိုင်ကာ ကုသနေ၍ မရပေ။
ထို့ပြင် တရားထိုင်ခြင်းသည် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူများသာ လုပ်၍ရခြင်းဖြစ်ရာ စိတ်ရောဂါရှိသူများနှင့် ရောဂါပြင်းထန်စွာ ခံစားနေရသူများအတွက်မူ တရားထိုင်ခြင်းကို လေ့ကျင့်၍ ရနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဘာ့ကြောင့် ကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုမှတ်သင့်သလဲ၊ ?
ဘ၀မှာ ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ရန်၊ ကျန်းမာရန်အတွက် ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ရှုမှတ်သင့်ပါသည်။ အထပ်ထပ်လေ့လာထားချက် သုတေသနပြုချက်များအရ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်သူများသည် ယခင်ကထက်ပိုပြီး ကျန်းမာလာကြသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုပြီး သဟဇာတဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လန်ဒန်မြို့၊ ဆေးရုံအလင်းသတင်းစာ (Hospital Times of London) က (Dr. Demetrikanellakos) ၏ သုတေသနပြုချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးပြီး ဖေါ်ပြခဲ့၏။
“ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လုပ် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ စွမ်းအင်နှင့် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးတယ်။ ကိုယ်နဲ့စိတ် တင်းကျပ်မှုကို လျှော့ကျစေပြီး၊ စိတ်ငြိမ်းအေးမှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ အရက်အပါအ၀င် အာရုံကိုထင်မှားစေတဲ့ ဆေးဝါးများကို သုံးစွဲလိုတဲ့ ဆန္ဒကို လျှော့ပါးစေပါတယ်။ (သို့မဟုတ်) လုံးဝ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှုန်းကို လျှော့နည်းစေပါတယ်။ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ တစ်ညတာ အိပ်ရေးဝတာထက် ပိုပြီး သာလွန်တဲ့ အပန်းဖြေမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်များနဲ့ အခြားတိကျသာလွန်မှုတေါ အမြောက်အများ ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့စမ်းသက်ချက်များက သက်သေခံထားပါတယ်” ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ကမ္မဋ္ဌာန်း ရှုမှတ်ခြင်းဟာ ပိုပြီးကျန်းမာစေသလား?
ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်း စာရင်းဇယားများက ညွှန်ပြနေသည်။ ယခုအထိ ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာချက်များအရ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအပေါ် အမှန်တကယ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။
“အထဲမှာ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စက်ကို ငါတို့က အနားပေးရင် အဲဒီစက်က အနာရောဂါဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားမှာပေါ့။” လို့ မဟာရိရှီ (Marishi) ကပြောခဲ့သည်။
သူ၏အခြေခံကျသော အကြောင်းပြချက်များသည် အလွန်ကောင်း၏။ နက်နဲသော အနားရခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးသည်ဟု ဆေးသိပ္ပံက သဘောတူခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၏။ ထို့ပြင် အနားယူခြင်းကြောင့် အချို့သော မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းများ ပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါသည်။ (Dr. Herbert Beenson) တို့၏ လေ့လာချက်အရ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းသည် နက်ရှိုင်းသော အပန်းဖြေမှုကို အများကြီး ရရှိစေသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဟားဗက်တက္ကသိုလ်(Harvard University) က ဒေါက်တာ ဟားဘက်ဘင်ဆင် အပါအ၀င် နှလုံးရောဂါ ဆရာဝန် အချို့သည် နှလုံးရောဂါသည်များကို ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းပြချက်က “လေဖြတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကိုယ်စိတ်တင်းကျပ်မှုတို့ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ ရလာဒ်တစ်ခု ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်ခြင်းက အဆိုပါ တင်းကျပ်မှုကို လျှော့နည်းစေသောကြောင့် နှလုံးရောဂါကိုလည်း သက်သာစေခြင်းဖြစ်၏” ဟု ဆိုသည်။
ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်(Princeton University) က ရူပဗေဒ ပါမောက္ခ တစ်ဦးက “ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အထွေထွေကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေတယ် ဆိုတာကို သံသယဖြစ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ ရောဂါအားလုံးကိုတော့ မပျောက်ကင်းစေနိုင်ဘူး။
ကိုယ်စိတ် တင်းကျပ်မှုကို လျှော့နည်းစေပြီး၊ နက်ရှိုင်းတဲ့ အပန်းဖြေမှုကို ရရှိစေတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟာ ခင်းဗျားရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အင်မတန် အကျိုးများပါတယ်” ဟု သူ၏အမြင်ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဟာဒဗက်ဆေးကျောင်း (Harvard University Medical School) မှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ် သူများကို စမ်းသပ်နေသော သွေးတိုးနှင့် နှလုံးရောဂါ အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ဟားဘက်ဘင်ဆင်က သူ၏စမ်းသပ် တွေ့ရှိသည့် အဖြေကို ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ အမေရိကန်ဂျာနယ် (American Journal of Physiology) မှာ ဖေါ်ပြထား၏။ ယင်းအစီရင်ခံစာကို တိုင်းမဂ္ဂဇင်း (Time Magazine) က အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်သူများရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလုပ်လုပ်တဲ့နှုန်းဟာ သိသိသာသာ လျှော့ကျသွားတယ်။ နှလုံးကလည်း လျှော့ပြီးညှစ်တယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုရဲ့ အညွှန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အရေပြားရဲ့ လျှပ်စစ်ခုခံမှုဟာ ထူးထူးခြားခြား မြင့်တတ်လာတယ်။
ဒါဟာ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်သူက တင်းကျပ်မှုပြေလျှော့နေတာကို ပြတာပဲ။ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို လျှော့ထုတ်တယ်။ ဥဏှောက်ရဲ့ အယ်လ်ဖာလှိုင်း (Alpha Wave) များဟာ ပြင်းအား (Intensity) တိုးလာတယ်။
ဒါလည်း တင်းကျပ်မှု ပြေလျှော့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုပါပဲ။ တစ်ချိန်တည်းမှာ သွေးထဲက လက်တစ်အက်စစ် (Lactic Acid) ဓါတ် ထွက်ပေါ်တဲ့နှုန်းဟာ လျှော့ကျသွားပြန်တယ်။ ဒါကလည်း စတ်ပူပန်မှု လျှော့ကျသွားတဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဤသည်တို့မှာ ကမ္မဋ္ဌာန်းရှုမှတ်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းနှင့် ပက်သတ်၍ အနောက်တိုင်း ဆေးပညာအမြင်နှင့် သုတေသနပြု လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ မိမိဘ၀တွင် အမှန်တကယ် ရောဂါကင်းမှု၊ ကျန်းမာမှု၊ အသက်ရှည်မှုကို လိုလားသူတိုင်း ဘာသာရေးကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့် ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟူသော တရားအားထုတ်ခြင်းကို လက်မလွှတ်သင့်ကြောင်း သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။ လူတိုင်းကိုယ်စီ ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ခြင်းဟူသော တရားအားထုတ်ခြင်းကို ပြုလုပ်၍ ရောဂါအပေါင်းမှ ကင်းလွတ်၍ ကျန်းမာခြင်း ဆုလာဘ်ကို အရယူနိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။
၁။Alternative Therapy Western Medicine.
အလှည့်အပြောင်း ကုထုံးများနှင့် အနောက်တိုင်းဆေးပညာအမြင်၊ မော်ဦး ဆေး(၂)
၂။(Tranquility Without Pills, All About Transcendental Meditation, By-Jhan Robbins, David Fisher.
ဆေးမကူဘဲ ငြိမ်းအေးနည်း၊ ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်။]
ဗုဒ္ဒမြတ်စွာသာသနာ ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းပါစေ
Zar Ni Aung